Xaaska Mauro Icardi oo ka hadashay xiisaha kaga imaanaya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid – Gool FM
Xaaska Mauro Icardi oo ka hadashay xiisaha kaga imaanaya kooxaha Barcelona iyo Real Madrid
(Inter) 09 Jan 2019. Xaaska Mauro Icardi isla markaana ah wakiilkiisa ee Wanda Nara ayaa sheegtay in wali aysan heshiis la gaarin kooxda Inter Milan, si uu qandaraas cusub qalinka ugu duugo xiliyada soo aadan.
Wanda Nara ayaa ka hadashay mustaqbalka 25 jirka reer Arjantina ayaa waxay tiri:
“Ma jiro ilaa iyo haatan wax heshiis ah ay wada gaareen Mauro Icardi iyo kooxda Inter Milan ee ku aadan qandaraaska cusub, wax walba si wanaagsan uma socdaan”.
“Dalab ka yimid kooxda reer Talyaani waa mid ka fog waxa laga filayay, ciyaaryahanka ayaana helaya dalabyo xoogan”.
“Mauro Icardi macquul ma noqoneyso inuu qandaraaska ugu cusbooneysiiyo Inter Milan isla mushaarka uu haatan ka qaato, weeraryahanka reer Argantina wuxuu haatan qaadanayaa qaab ciyaareed cajiib ah”.
“Waxaa jira kooxo badan ee wada xiiseenaya saxiixa Mauro Icardi sida Barcelona iyo Real Madrid, waxaa intaas sii dheer dalabyada kale uu ka helayo kooxaha ka dhisan England iyo France”.
Mauro Icardi ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda Inter Milan wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-2021, taasoo la micno ah in kooxda reer Talyaani ay heysato fursad ah hal xili ciyaareed iyo bar ay ugu iibin karto qiimo macquul ah, iyadoo sidoo kale ay suuragal noqon karto inuu noqdo mid ka mid ah gooldhaliyaasha ugu fiican ee taariikhda Inter Milan.
Manchester United oo qarka u saaran saxiixeedii ugu horreeyay ee suuqa Bishan Janaayo
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Real Madrid Vs Leganes